Dib u eegis Recruiter.com: Software awood leh oo loogu talagalay qorayaasha mashquulka ah - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Dib-u-eegista Recruiter.com: Software Awood Leh oo Loogu Talagalay Qorayaasha Shaqada Ku Jira
Shirkadaha waaweyn ayaa malaayiin doollar sannad walba ku bixiya sidii ay u heli lahaayeen musharraxiinta ugu wanaagsan si ay u buuxiyaan boosaskooda furan. Nidaamku waa mid waqti badan qaata, oo naadir ah si guul leh - taasina waa sababta ay ugu baahan yihiin caawinta khabiirka qorista software sida Shaqaalaysiinta.com. Aynu eegno qaar ka mid ah sababaha ugu sarreeya ee ay tahay in shirkaddaadu ay tan u isticmaasho software baahideeda shaqaaleysiineed, ma aha oo kaliya in ay ku badbaadiso wakhti laakiin sidoo kale inay kaa caawiso inaad shaqaaleysiiso musharixiin ka tayo badan sidii hore!
1. Waqti badbaadi Shaqaalaysiinta.com
Recruiter.com waa aalad weyn oo kaa caawisa maareynta shaqo raadintaada. Waxaad isticmaali kartaa goobta si aad ugu dhejiso résumé -kaaga oo aad shaqo u raadsato kaligaa. Waxaad kaloo isticmaali kartaa adeegyadooda si ay kaaga caawiyaan inaad shaqo hesho. Recruiter.com waxay u gudbin doontaa résumé -kaaga shirkadaha waxayna kula soo xiriiri doontaa haddii shirkad danaynayso inay ku wareysato. Shirkadda ayaa kugu wargelin doonta tallaabooyinka xiga, sida soo jeedin, haddii ay habboon tahay. Markaad buuxiso hannaan codsi shaqo oo baaxad leh, waxaad gelisid wax walba, waxaad samaysay wax cajiib ah maal-gashiga. Haddii aad nasiib badnayd iyo haddii kaleba, waxaad samaysay wax kasta oo aad awooddo si aad u hesho loo -shaqeeyaha aad rabto inuu ku shaqaaleeyo. Nasiib darro, inta badan codsadayaashu waligood ma maqli doonaan jawaabta shirkadda shaqaalaysiinta. Nasiib wanaag, Recruiter.com waxay kugu badbaadin kartaa mashiinka u dhigma ee horumarsan oo hadda kuu oggolaanaya inaad ku darto ereyada muhiimka ah resumeygaaga si aad u kordhiso fursadahaaga inay kula soo xiriiraan kuwa sameeya shaqo.
Kahor intaadan ku dhejin resumeygaaga Recruiter.com, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto profile. Iyadoo ay jiraan qalab badan oo ku saabsan internet taasi waxay kaa caawinaysaa inaad samaysato degelkaaga gaarka ah, waa lama huraan isticmaalka software ee Recruiter.com. Marka loo eego faallooyin badan oo macaamiisha ah, degelku si dhakhso leh ayuu u buuxsamaa marka aad abuurto astaantaada, iyo marka aad taas sameyso, waxaad geli kartaa resumeygaaga. Marka profile-kaagu noolaado, isticmaal shaqo raadinta tooska ah si aad hadda u hesho fursado shaqo oo gaar ah oo ku xiisaynaya, maaha oo kaliya goobtaada laakiin sidoo kale agagaarkaaga. Recruiter.com waxay isticmaashaa shuruudaha horumarsan ee is waafajinta software si aad u falanqeyso resumeygaaga si aad u hesho musharaxiinta ugu fiican ee shaqo kasta oo furan. Waxa kale oo ay sheeganaysaa in la helo musharixiin ku habboon ma aha oo kaliya gudaha garoonkaaga laakiin gudaha magaaladaada ama gobolkaaga. Waxaad raadin kartaa ereyo muhiim ah oo gaar ah, sida 'xogta iibka' ama 'xisaabtan' si ay kaaga caawiso inaad hesho doorar la mid ah. Haddii aad xiisaynayso sida ay u hesho musharraxiinta macluumaadkaaga gaarka ah, halkan waxaa ah qaar ka mid ah siyaabaha aasaasiga ah:
2. Ka hel musharrixiinta ugu fiican hal raadin
Sida ugu wanaagsan ee lagu heli karo musharaxiin waa weyn waa inaad sii raadiso ilaa aad ka hesho mid sax ah. Haddii aad hayso qoraal shaqo, laakiin aanad helin jawaabo badan, isku day inaad wax ka beddesho sharraxaadda shaqada si aad u noqoto mid la jaan qaada waxa aad raadinayso. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad hagaajiso xidhmadaada magdhowga si aad u aragto inay taasi kaa caawinayso inaad soo jiidato musharaxiin badan. Hab kale ayaa ah in la isticmaalo astaamaha shaqo raadinta ee looxyada shaqada ee caanka ah. U fiirso qaybaha shaqada ee leh codsadayaasha ugu badan, iyo habka ugu wanaagsan ee lagula xiriiri karo iyaga adoo ku dhejinaya shaqo raadintan dhufto ee!
Recruiter.com wuxuu ku siinayaa talooyin wax ku ool ah iyo qalab shaqo raadin hufan. Aynu eegno saddex ka mid ah:
1) Waxaan raadineynaa dhacdo ama waayo -aragnimo hadal oo ku habboon doorkan. Dhacdooyinka aan xiisaynayno waa bixinta, ka -qaybgalka, ama baridda. Tusaale ahaan, waxaan jeclaan lahayn inaan ka hadalno codsiga sayniska xogta xagga fayoobaanta, Innovation in the daryeelka caafimaadka warshadaha, ama Innovation Mapping in the warshadaha qaybta. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waxa aan raadineyno, booqo jobs.recruiter.com. Waxaan bixinaa $ 1 halkii 1000 eray.
2) Haddii aad ku dhibtooneysid inaad raadiso musharraxiin aad wareysato, adeegso aaladdayada muhiimka ah ee shaqada si aad u hesho dad xiiseynaya nooca shaqada aad haysato. U adeegso qalabkan si aad u hesho xiriiro oo aad u dirto emayl si aad kaaga caawiso helitaanka musharrixiinta. Hubso inaad horeyba ula socotey musharrixiintaas kahor intaadan jadwalin wicitaan shir ah si aad ula kulanto shaqsi ahaan, si aad u soo xaroon karto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sooyaalkooda, khibradooda, iyo hoggaankooda.
3) Recruiter.com wuxuu u kala saari doonaa astaantaada afartaan qaybood: dhacdo, barid, la-talin, iyo la-hawlgal. Khasab kuguma aha inaad talaabadan qaaddo hadaadan rabin, laakiin waa sharci fiican oo suul ah. Waxaad ku dallaci kartaa rajooyinkaaga wax badan haddii aad tallaabadan qaadatid, laakiin muddada-dheer, waxaad heli doontaa musharraxiin badan. Marka, markaad raadineyso musharixiin horey uhelay dalabyo wareysi ah oo aad kaheshay shirkadaada, u dir emaylkan: Markaad furato emaylka, waxay arki doonaan codsi fudud oo jawaab kooban ah oo kaa caawinaya inaad go'aansato cida u noqo musharrax wanaagsan booskaas.
3. Abuur, habeyn oo maamul shaqooyinkaaga
Ku bilow shaqo abuur. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa shaqo taas oo ah fiidiyoow, shey, dhacdo, ama nooc kale oo nooc ah. Si kastaba ha noqotee, tus akhristayaashaada waxa ku dhex jira shaqada. Shaqadaada gudaheeda, ku dar khibrad hore iyo shahaadooyin. Sidan, haddii aad qof u kireynaysid jago ku lug leh aqoon ama danayn xoog leh mawduuc gaar ah, waxaad ka ogtahay khibrada aad u baahan tahay sidoo kale.
Hadda waxaan u baahan doonnaa wax ka badan uun cinwaankaaga shaqo. Adeegso ereyo isku dhafan si aad uhesho qofka saxda ah. Isku day inaad ku darto waxyaabaha soo socda natiijooyinkaaga raadinta:
Xitaa waad ku dari kartaa sharraxaad sida:
“Qofka ku shaqeeya waxyaabo jilicsan” ”
"Qof madadaalo leh oo lala wadaago"…
"Qof qosol badan"…
"Qof aan keli ku ahay internetka" met
"Waxaan u maleynayaa in filimkeeda ay ugu jeceshahay uu yahay Micnaha Gabdhaha"…
"Qof ka shaqeynayay dukaan weyn-sanduuq"…
"Qof wax ku sameeya / ku dhajiya LinkedIn"…
Markaad ogaato cinwaankaaga shaqada, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad adeegsato erey isku mid ah oo la mid ah sidaa darteed waxaad ka heli kartaa qofka saxda ah ee aad raadineyso labada natiijadood ee raadinta ugu horreysa.
Cinwaankaaga hoostiisa waa shuruudaha shaqadaada iyo shaqadaada la filayo. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad dejiso waxyaabaha laga filayo iyo inaad hubiso inaad labadiinuba isku raacdaan in booskani si fiican idiinku shaqeyn doono. Xitaa waad ku dari kartaa heerka mushaharka haddii aad tahay xirfad-yaqaan xirfad dhexe ah. Waad u adeegsan kartaa waxaad u baahan tahay ijaarka si aad uga ogaato jagadaada, sida himilada shirkadda, qiyamka asaasiga ah, iyo dhaqanka shirkadda. Xitaa waad tegi kartaa illaa inta aad ku qoreyso sharaxaadda shaqada lafteeda. Tusaale ahaan: “Waxaan u nuglahay badbaadadaada shakhsi ahaaneed iyo qanacsanaantaada. Caafimaadka shakhsiga iyo badbaadada ayaa ah ahmiyadeena ugu sareysa. Waa inaad si xushmad leh ula xiriirtaa macaamiisha iyo asxaabta. ''
4. La soco musharixiintaada iyo horumarkooda hanaanka shaqaalaynta
Habka ugu wanaagsan ee aad ugu sii nagaan karto nidaamkaaga shaqaalaynta waa inaad la socoto wax walba. Waxaad ubaahantahay inaad ogaato sida codsadayaashu u egyihiin markay shaqada codsanayaan, macluumaadka ay hayaan iyo sida wanaagsan ee ay ugu socdaan howlaha shaqaalaynta. Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo aad ula socon karto codsadayaasha iyo horumarkooda. Waaxdaada HR waxay kaa caawin kartaa helitaanka musharixiinta dadka isticmaalaya qalabka soo socda:
1. Dib u bilaw — musharraxa shaqaalaynta ee mustaqbalka ayaa buuxin doona resume fudud oo wata magacooda oo buuxa, magacooda shaqo, shirkad, waxbarashada, portfolio, iyo waayo-aragnimo shaqo hore.
2. CV-yada - labada murashaxba waxay u baahan yihiin inay ku daraan shaqo dhajinta boodhadhkooda shaqo.
3. Resume templates - asal ahaan waa muunad resume ah oo qofka HR uu abuuray ku saleysan CV-yadaada. Si wax looga fududeeyo iyaga inay dib u eegaan oo ay socodsiiyaan, waxay bixineysaa iyaga in la siiyo xulashooyin dhowr ah oo kala duwan.
4. Su'aalaha wareysiga - tani waa meesha ugu weyn ee musharraxiintu ku soo bandhigi karaan aqoontooda, xirfadahooda, iyo waaya-aragnimadooda. Wareysiyayaashu waxay u adeegsan doonaan su'aalahan si ay u kala soocaan dib u soo celinta oo ay u go'aamiyaan haddii ay ku habboon yihiin shirkadda ka hor intaadan xitaa la kulmin shaqsi ahaan.
Statistics u adkeyso tan: waxay qaadataa inta u dhexeysa 150 iyo 230 maalmood in shirkad ay shaqaaleysiiso shaqaale cusub. Markaad codsanayso shaqo, waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iidaysato inaad qaadato arday dhawaan ka qalin jebiyey kulliyad (ama qof dhowaan qalin jabiyay), qof leh khibrad aad u fiican, xirfadlayaal mashquulsan, ama musharraxiinta shaqo ee ugu horraysa qiimahooda. Furaha ayaa ah in la raadiyo wax kasta oo calaamado ah oo ka dhexeeya musharraxaaga si loo sahlo shaqo -raadintaada sidaas darteedna dhakhso badan! Markaad haysato liiska musharraxiinta leh sifooyin la mid ah, waxaad ku waafajin kartaa cinwaannada shaqada.
Recruiter.com waxaa loogu talagalay qorayaasha qorista. Sanadihii la soo dhaafay, Shaqaalaysiinta.com ayaa ahayd meesha ay qorayaashu isugu yimaadaan si ay ula wadaagaan khibradooda ayna uga caawiyaan dadka shaqo doonka ah inay helaan shaqooyinka ay doonayaan. Recruiter.com waxaa dhistay qorayaal qorista. Runtii waa farsamo qorista qarniga 21-aad. Waxay ku habboon tahay Gmail iyo Muuqaalka, waxayna ka dhigeysaa wax fudud in la raadiyo musharrixiinta oo lala xiriiro. Waxa ugu fiican ayaa ah in qalabkani leeyahay awood sahamin. Waad u adeegsan kartaa inaad weydiiso shabakaddaada su'aalaha tooska ah, u isticmaal inaad ku sameyso wareysiyo shaqsiyeed, iyo wax badan oo dheeri ah!
Sababtoo ah qorista waa shaqo waqti badan qaadata, shirkado badan ayaa ka gaabsada shaqaalaynta musharrixiinta iyagoon haysan wax raadraac ah. Marka, waa muhiim in la siiyo resume tayo sare leh. Recruiter.com waxay ku timaadaa hawshan xoog buuxda, waxayna ka caawisaa loo shaqeeyayaasha inay helaan murashaxa ugu habboon boos kasta oo furan. Intaas waxaa sii dheer, barnaamijku wuxuu sidoo kale kuu fududeynayaa inaad jadwal u sameyso kulamada aad la leedahay musharixiintaas. Marka waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ka jawaabto dhowr su'aalood oo fudud iyo voilà! Isla markiiba waad ogtahay haddii murashaxu yahay ciyaar fiican. Dhameystirka balooggan iyadoo la soo gabagabeynayo in Recruiter.com uu yahay aaladda ugu fiican ee kaa caawinaysa inaad hesho hibadaada soo socota.
Halkan ka kiree hibadaada ugu fiican ……… ?? riix halkan
No Natiijooyinka la helay
Bogga aad codsatay waa la waayay. Isku day shagaajinta raadinta, ama isticmaal navigation kor ku xusan in ay helaan jagada.